သတင်း - အာလူးရိတ်သိမ်းသူများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ
စက်မှုလယ်ယာ၏ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေများအာလူးရိတ်စက်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို သယ်ဆောင်သူအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများဖြင့် အချင်းချင်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ရမည်။ဤနည်းဖြင့်သာ ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1. အနက်ကို စိုက်ပါ။
အာလူးစိုက်ခြင်း၏အတိမ်အနက်သည် အလွန်နက်ရှိုင်းခြင်းမရှိသင့်ပါ။စိုက်ပျိုးရာတွင် အလွန်နက်သော သို့မဟုတ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိတ်သိမ်းရန် မသင့်လျော်သော အာလူးသည် အလွန်နက်ရှိုင်းစွာ ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။
2. အတန်းအကွာ စိုက်ပါ။
အာလူးစိုက် အတန်းအကွာအဝေးသည် ကျဉ်းလွန်း၍ မကျဉ်းလွန်းဘဲ အတန်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။အာလူးရိတ်စက်အာလူးဥများ ပျက်စီးခြင်း၊ကျယ်ပြန့်လွန်းပါက အာလူးစိုက်ပျိုးမှု သိပ်သည်းမှုနှင့် အထွက်နှုန်း တိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။သိပ်သည်းမှုနှင့် အထွက်နှုန်းကို သေချာစေရုံသာမက ဆန့်ကျင်ဘက်အတန်းများတွင် စက်မှုလယ်ယာ ရိတ်သိမ်းရာတွင်လည်း လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော အလင်းရောင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အာလူးများ ကြီးထွားစေရန်အတွက် ကျယ်ကျယ် ကျဉ်းမြောင်းသော အတန်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ .
ရာသီဥတု၊ မြေဆီလွှာ၊ ရေနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာစသည့် အမျိုးမျိုးသော အခြေအနေများကြောင့် အာလူးသည် ပြားလိုက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ခေါင်စိုက်ခြင်းနှင့် ပလပ်စတစ်ဖလင်စိုက်ခြင်းစသည့် အမျိုးမျိုးသော စိုက်ပျိုးမှုပုံစံများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။မတူညီသော စိုက်ပျိုးမှုပုံစံများဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်။အာလူးရိတ်စက်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်လျှောက်လွှာ။
(၁) မြေပြန့်စိုက်မုဒ်။ပြန့်ကားသောစိုက်ပျိုးမှုပုံစံသည် တောင်ကုန်းမြင့်၊ အေး၊ အေး၊ နှင့် အစောပိုင်း စိုက်ပျိုးသည့်နေရာများတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။နည်းပညာ၏သော့ချက်မှာ အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ထယ်ရေးအလွှာရှိ မြေဆီလွှာကို တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင် လှည့်ရန်နှင့် ထွန်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ အမှိုက်ဖြူတွင် မြေသြဇာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မျိုးစေ့ချခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာပြုစုခြင်းတို့ကို ပြီးမြောက်စေရန်ဖြစ်သည်။စက်ယန္တရားရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးမှာ အကျယ်အဝန်း ၆၀ စင်တီမီတာ ကျယ်သော အတန်းများပါရှိသော အတန်းများ နှင့် အနံ ၆၀ စင်တီမီတာရှိသော အာလူးနှစ်တန်း နှင့် အပင်အကွာအဝေး 30 စင်တီမီတာ ရှိသော အာလူးနှစ်တန်း 40 စင်တီမီတာ ကျဉ်းသော အတန်းများ ဖြစ်သည် ။ အလင်းဂီယာ, ဒါပေမယ့်လည်းရိတ်၏လွယ်ကူချောမွေ့အာလူးရိတ်စက်ဆန့်ကျင်ဘက်အတန်းများတွင် ကွဲထွက်နှုန်းကို လျှော့ချပြီး အထွက်နှုန်းကို တိုးတက်စေသည်။အသားတင်နှုန်း။သို့ရာတွင် ခေါင်စိုက်အာလူးများကို စက်မှုလယ်ယာစနစ်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည် ကြီးမားပါသည်။အာလူးကို မြေဆီလွှာ ခွဲထုတ်ခြင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ညံ့ဖျင်းသည်။
(၂) ခေါင်စိုက်မုဒ်။ဤသည်မှာ မြင့်မားသောရေနှင့် မြေသြဇာစိုက်ကွက်များ၏ အဓိက စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာ၏သော့ချက်မှာ ခေါင်ကြဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ခေါင်မိုးစိုက်ခြင်းသည် မြေဆီလွှာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် နေရာကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည်။အာလူးကြီးထွားစဉ်အတွင်း လေဝင်လေထွက်၊ အလင်းပို့လွှတ်မှုနှင့် ရေစိမ့်ဝင်မှုတို့ကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးသည်။ဤစိုက်ပျိုးမှုပုံစံသည် အာလူးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မြေသြဇာနှင့် မြေဆီလွှာစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်သာမက အာလူးရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေပါသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သော width ကို လိုအပ်သည်။အာလူးရိတ်စက်60 စင်တီမီတာထက်ကြီးသည် သို့မဟုတ် နှစ်ဆတိုးသည်။ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပြီး၊ ခွဲထွက်မှုအားကောင်းသည်၊ ကျိုးနှုန်းနည်းသည်၊ အသားတင်အထွက်နှုန်းလည်း မြင့်မားသည်။
(၃) Mulch စိုက်နည်း။ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေနှင့် မြေသြဇာအခြေအနေရှိသော မြို့ကြီးများတွင် အာလူးစိုက်ပျိုးရန် ပလပ်စတစ်ဖလင်ပြားကို အသုံးပြုခြင်းသည် အာလူးဈေးကွက်ကို စောစီးစွာရရှိစေရုံသာမက အကျိုးကျေးဇူးများ တိုးပွားစေရုံသာမက အထွက်နှုန်းကိုလည်း တိုးမြင့်လာစေပါသည်။ဟိအာလူးရိတ်စက်ကောင်းသောခွဲထွက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော mulching mode တွင်စက်မှုလယ်ယာဖြင့်အာလူးရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရိတ်သိမ်းခြင်းကို အပြိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး စပျစ်နွယ်ပင်များနှင့် mulching film ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချည်နှောင်မှုနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကို အထူးဂရုပြုသင့်သည်။